Matambo matsva eApple Watch yezhizha | Ndinobva mac
Matambo matsva eApple Watch yezhizha
Zhizha rave pedyo nesu. Zhizha iro kunyange hazvo risiri kuzoita sevamwe, hazvireve kuti hatigone kupfeka zvigadzirwa zvitsva pamaoko edu neApple Watch. Apple yakatanga tambo nyowani dzekutarisa. Ivo vese kubva kumitambo renji, saka mutengo weumwe neumwe wavo € 49. Nemavara ezhizha chaizvo, unotova nawo muApple Chitoro uye muzvitoro zvepanyama.
Pese panosvika zhizha, Apple inowanzo gadziridza mabhande eApple Watch ine pastel mavara chaizvo chirimo. Iri zhizha raisazove rakasiyana mune izvi, nekuti mune vamwe zvichave, sekuziva kwedu tese, uye isu tatova nemabhande mana matsva anowanikwa kune yedu wachi.
Mavara akasarudzwa akafanana chaizvo nemwaka wezhizha watiri kupinda mauri. Pakazara pane mana iwo mavara matsva:
Dzese dzakagadzirwa ne fluoroelastomer yepamusoro-performance yakakosha, saka ndeve Apple's-ese-terrain tambo kuunganidzwa. Kunyangwe iyo pfungwa yekumutsiridzwa kwetambo yeganda yaionekwa, hatisati tazviona muzvitoro zveApple uye kambani haina kuzivisa kuvhurwa kwayo.
Iwe unotoziva kuti iyi mhando yetambo ndeye-saizi-inokodzera-ese nekuti bhokisi rinouya rakagadzirirwa saizi S / M uye M / L. Izvo zvaunofanira kusarudza ihukuru hweApple Watch bhokisi. Vanouya vakagadzirira iwo mavhezheni maviri aripo uye neechinyakare. Saka zvinoshanda kubva pa38mm kusvika 44mm.
Aya mana mamodheru matsva ajoinina yatovepo uye ichangoburwa kudada bhandi kuti pamwe nematanho anoenderana, inogona zvakare kuve sarudzo yakanaka kwazvo kuratidza kwete chete tekinoroji pane yedu ruoko, asiwo yakawanda dhizaini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambo matsva eApple Watch yezhizha
MaARM mapurosesa anouya kuMacBook kuziviswa kuWWDC
Mutsva mutsva kubva kuApple uchifarira "Nhema Hupenyu Nyaya" muApple Mepu